လျှပ်စစ်မလို၊ ဘတ်ထရီမပါဘဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်တဲ့ gadget လေးများ | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget လျှပ်စစ်မလို၊ ဘတ်ထရီမပါဘဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်တဲ့ gadget လေးများ
မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ နည်းပညာတွေဟာ အခန်းတစ်ခန်းစာလောက်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကနေ လက်ဖ၀ါးသာသာရှိတဲ့ ကြိုးမဲ့ပစ္စည်းတွေအဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ အခုဆိုရင်လည်း ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေဟာ လျှပ်စစ်မလိုပဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်စေဖို့ gadget လေးတွေကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို 3D print ထုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကအသံကို ဘတ်ထရီမလိုတဲ့ ကိရိယာလေးနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်? ဒါမှမဟုတ် ကီးချိန်းမှာတပ်လို့ရတဲ့ ခလုတ်လေးနဲ့ မီးဖွင့်၊ပိတ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်? ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာကုန်နေပြီဆိုတာ သင်မသိသေးခင်မှာ အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်? ဒါတွေအားလုံးကို ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ် Networks & Mobile Systems ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးပါပြီ။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကြိုးမဲ့ sensor တွေကို 3D print ထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ widget တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ အခြားသောဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ပါ။ ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလည်း ဘတ်ထရီ၊ လျှပ်စစ်မလိုအောင် လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပရောဂျက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီ gadget လေးတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ နာရီအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ မခြားနားပါဘူး။ နာရီတွေဟာ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကို စပရင်၊ ဂီယာနဲ့ ရွေ့လျားလိုက်တဲ့အခါမှာ(ခလုတ်ကိုနှိပ်တာ၊ ပုလင်းထဲကအရည်တွေ စီးဆင်းတာ) ထိမိတဲ့ခလုတ်လေးတွေကတစ်ဆင့် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီလိုသေးငယ်ပြီးတော့ 3D-print ထုတ်ထားတဲ့ အင်တာနာလေးဆီက ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုကတော့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်အချက်ပြစနစ်တွေကို တန်ပြန်ရိုက်ခတ်စေပြီးတော့ သူတို့သိစေချင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာကို ပို့ဆောင်ပေးအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ အဲဒီအချက်ပြစနစ်တွေဟာ တိကျတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ တန်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှ သိရှိစေမယ့် အချက်အလက်တွေ ပါဝင်နေမှာပါ။ နှိပ်ခြင်း၊ ရွေ့လျားခြင်းစတဲ့ ပြင်ပမှသက်ရောက်မှုတွေဟာ အင်တာနာတွေကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်စေနိုင်ပြီးတော့ ၀ိုင်ဖိုင်အချက်ပြစနစ်တွေကို တန်ပြန်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဥပမာ အ၀တ်လျှော်စက်ရဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်ဘူးထဲမှာ တွဲဆက်ထားတဲ့ gadget လေးတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဆပ်ပြာမှုန့်လောင်းထည့်လိုက်တာနဲ့ ဘီးလုံးလေးကလည်သွားပြီးတော့ အင်တာနာကို ထိလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘူးထဲမှာ ဆပ်ပြာမှုန့်ဘယ်လောက်ကျန်သေးသလဲဆိုတာကို ကြိုးမဲ့အချက်အလက်တွေပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ သင့်စမတ်ဖုန်းကတော့ အချက်အလက်တွေကို ထိန်းသိမ်းပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဆပ်ပြာမှုန့်ဟာ နည်းနေပြီဆိုရင်တော့ အလိုအလျောက် ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Amazon ရဲ့ Dash ခလုတ်၊ အနုတ်ခလုတ် နဲ့ ဘတ်ထရီလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၀ိုင်ယာမလို၊ ဘတ်ထရီမလို ၊ ကန့်သတ်ထားတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို လက်နဲ့ခြေနဲ့ အသုံးပြုပြီးတော့ အားသွင်းရတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မှာ 3D printer ရှိမယ်ဆိုရင် အခုပဲ အခမဲ့ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သုတေသီတွေရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ အားလုံးအတွက် CAD မော်ဒယ်လ်တွေ၊ အင်တာနာ အချက်အလက်တွေ၊ ဒီလိုဘတ်ထရီမပါတဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို အားလုံးဝေငှထားပါတယ်။ ဘာကိုစောင့်နေဦးမှာလဲ၊ အခုပဲ တီထွင်လိုက်ရအောင်။
3D print ကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ “The 3D Printing Handbook: Technologies, Design and Applications” ဆိုတဲ့ Ben Redwood, Filemön Schöffer, နဲ့ Brian Garret တို့ ရေးသားတဲ့ စာအုပ်လေးကိုတော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ သင့်အတွက်အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့အတွက် ထောက်ခံပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကျြစိတဈမှိတျအတှငျးမှာပဲ နညျးပညာတှဟော အခနျးတဈခနျးစာလောကျရှိတဲ့ ကှနျပြူတာတှကေနေ လကျဖဝါးသာသာရှိတဲ့ ကွိုးမဲ့ပစ်စညျးတှအေဖွဈကို ရောကျရှိသှားပါပွီ။ အခုဆိုရငျလညျး ဝါရှငျတနျတက်ကသိုလျမှ သုတသေီတှဟော လြှပျစဈမလိုပဲ ဝိုငျဖိုငျခြိတျနိုငျစဖေို့ gadget လေးတှကေို စမျးသပျနပေါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး ဒီပစ်စညျးလေးတှကေို 3D print ထုတျကွညျ့နိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ကှနျပြူတာကအသံကို ဘတျထရီမလိုတဲ့ ကိရိယာလေးနဲ့ ထိနျးခြုပျနိုငျမယျဆိုရငျ? ဒါမှမဟုတျ ကီးခြိနျးမှာတပျလို့ရတဲ့ ခလုတျလေးနဲ့ မီးဖှငျ့၊ပိတျလုပျလို့ရမယျဆိုရငျ? ဒါမှမဟုတျ ဆပျပွာကုနျနပွေီဆိုတာ သငျမသိသေးခငျမှာ အလိုအလြောကျဖွညျ့ပေးသှားမယျဆိုရငျ? ဒါတှအေားလုံးကို ဝါရှငျတနျတက်ကသိုလျ Networks & Mobile Systems ဓါတျခှဲခနျးမှာ စမျးသပျဖနျတီးခဲ့ပွီးပါပွီ။
“ကြှနျတျောတို့ရဲ့ရညျရှယျခကျြကတော့ ကွိုးမဲ့ sensor တှကေို 3D print ထုတျနိုငျဖို့ဖွဈပွီးတော့ widget တှထေဲမှာထညျ့သှငျးပွီးတော့ စမတျဖုနျးနဲ့ အခွားသောဝိုငျဖိုငျခြိတျဆကျနိုငျတဲ့ပစ်စညျးတှနေဲ့ တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျစဖေို့ပါ။ ဒီလိုအသုံးပွုတဲ့နရောမှာလညျး ဘတျထရီ၊ လြှပျစဈမလိုအောငျ လုပျဆောငျခငျြတဲ့ စိတျကူးပဲ ဖွဈပါတယျ” လို့ ပရောဂကျြဝကျဘျဆိုကျမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
ဒီ gadget လေးတှရေဲ့ အလုပျလုပျပုံကတော့ နာရီအလုပျလုပျပုံနဲ့ မခွားနားပါဘူး။ နာရီတှဟော သူတို့ရဲ့စှမျးအငျကို စပရငျ၊ ဂီယာနဲ့ ရှလြေ့ားလိုကျတဲ့အခါမှာ(ခလုတျကိုနှိပျတာ၊ ပုလငျးထဲကအရညျတှေ စီးဆငျးတာ) ထိမိတဲ့ခလုတျလေးတှကေတဈဆငျ့ ရရှိအောငျ လုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဒီလိုသေးငယျပွီးတော့ 3D-print ထုတျထားတဲ့ အငျတာနာလေးဆီက ကွိုးမဲ့ခြိတျဆကျမှုကတော့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဝိုငျဖိုငျအခကျြပွစနဈတှကေို တနျပွနျရိုကျခတျစပွေီးတော့ သူတို့သိစခေငျြတဲ့ စမတျဖုနျး ဒါမှမဟုတျ ကှနျပြူတာကို ပို့ဆောငျပေးအောငျ စီစဉျထားတာပါ။ အဲဒီအခကျြပွစနဈတှဟော တိကတြဲ့ပုံစံတှနေဲ့ တနျပွနျသှားမှာဖွဈပွီးတော့ ပို့လိုကျတဲ့ပစ်စညျးမှ သိရှိစမေယျ့ အခကျြအလကျတှေ ပါဝငျနမှောပါ။ နှိပျခွငျး၊ ရှလြေ့ားခွငျးစတဲ့ ပွငျပမှသကျရောကျမှုတှဟော အငျတာနာတှကေို ခြိတျဆကျခွငျး၊ ဖွုတျခွငျးတှေ ပွုလုပျစနေိုငျပွီးတော့ ဝိုငျဖိုငျအခကျြပွစနဈတှကေို တနျပွနျခွငျး၊ ဖမျးယူခွငျးတှေ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
ဥပမာ အဝတျလြှျောစကျရဲ့ ဆပျပွာမှုနျ့ဘူးထဲမှာ တှဲဆကျထားတဲ့ gadget လေးတဈခု ရှိတယျဆိုကွပါစို့။ ဆပျပွာမှုနျ့လောငျးထညျ့လိုကျတာနဲ့ ဘီးလုံးလေးကလညျသှားပွီးတော့ အငျတာနာကို ထိလိုကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘူးထဲမှာ ဆပျပွာမှုနျ့ဘယျလောကျကနျြသေးသလဲဆိုတာကို ကွိုးမဲ့အခကျြအလကျတှပေေးပို့လိုကျပါတယျ။ သငျ့စမတျဖုနျးကတော့ အခကျြအလကျတှကေို ထိနျးသိမျးပေးထားမှာဖွဈပွီးတော့ ဆပျပွာမှုနျ့ဟာ နညျးနပွေီဆိုရငျတော့ အလိုအလြောကျ ပွုလုပျပေးမှာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ Amazon ရဲ့ Dash ခလုတျ၊ အနုတျခလုတျ နဲ့ ဘတျထရီလိုမြိုး လုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။
ဝိုငျယာမလို၊ ဘတျထရီမလို ၊ ကနျ့သတျထားတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ကို လကျနဲ့ခွနေဲ့ အသုံးပွုပွီးတော့ အားသှငျးရတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ တကယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့မှာ 3D printer ရှိမယျဆိုရငျ အခုပဲ အခမဲ့ ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ သုတသေီတှရေဲ့ ဝကျဘျဆိုကျမှာ အားလုံးအတှကျ CAD မျောဒယျလျတှေ၊ အငျတာနာ အခကျြအလကျတှေ၊ ဒီလိုဘတျထရီမပါတဲ့ မှျောဆနျတဲ့ပစ်စညျးလေးတှကေို ဘယျလိုဖနျတီးမလဲဆိုတဲ့ လမျးညှနျခကျြတှကေို အားလုံးဝငှေထားပါတယျ။ ဘာကိုစောငျ့နဦေးမှာလဲ၊ အခုပဲ တီထှငျလိုကျရအောငျ။
3D print ကိုစမျးသပျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ “The 3D Printing Handbook: Technologies, Design and Applications” ဆိုတဲ့ Ben Redwood, Filemön Schöffer, နဲ့ Brian Garret တို့ ရေးသားတဲ့ စာအုပျလေးကိုတော့ ဖတျကွညျ့စခေငျြပါတယျ။ သငျ့အတှကျအဆငျပွမေယျထငျတဲ့အတှကျ ထောကျခံပေးထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
Previous articleယခုတလော စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်ဆုံး App (၅) ခု
Next articleဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Galaxy Note 8